Andriamifidisoa Zo · Aogositra 2013 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Aogositra, 2013
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Aogositra, 2013
SARIPIKA: Mametraka an-tSarintany ny Zavakanto An-Tanandehibe ao Buenos Aires sy ny Ankoatra Azy
Amerika Latina 28 Aogositra 2013
Misy vondrona Argentines iray manasa anao hizara sy hametraka an-tsarintany ny saripikan'ny graffiti hita ao amin'ny tanànanao.
LAHATSARY: Fitroarana am-binaingitr'i Brezila voarakitra an-dahatsary mahaleotena mitondra ny lohateny hoe ‘Fandrobana’ [‘Com Vandalismo’]
Amerika Latina 25 Aogositra 2013
Sarimihetsika novokarin'andiana mpanao gazety mahaleotena miresaka ny fahasamihafam-pitakiana ao anatin'ny fihetsiketseha-panoherana nitranga tao Fortaleza sy ny tanandehibe hafa tao Brezila.
Ejipta : “Tena naheno bala nandalo tambonin'ny soroko aho”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Aogositra 2013
Tantaran'ilay mpanao gazety sady mpaka sary Mosa'ab Elshamy izay saiky voatifitra sy nisy nangalatra ny fitaovam-piasany nandritra ny zava- nitranga tao Rabaa Al Adawiya tamin'ny androny 14 aogositra. Fifandonan'andian'olona maro sy ireo "mpitandro ny filaminana hampiasa ny fitaovam-piadiany tahaka ny eny an'ady. Nitantara ny zava-nanjò azy izy
Voadoro ny Fiangonana Kôpta ao Ejipta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Aogositra 2013
Maro ny mihevitra ao amin'ny tambajotra sosialy ejipsiana fa nandranitra ny fifandranitana ara-pivavahana ny Mpirahalahy Miozolomana, nampifandrafy ny miozolomana amin'ny kristiana ka nahatonga ny fanafihana fiangonana, varotra, tranon'ny kopta ny andron'ny 14 aogositra, tsy mbola nahitana trangana herisetra toy izany
Ejipta : Tifirina, Samborina ary Rahonana Ny Mpanao Gazety
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Aogositra 2013
Misy mitifitra anay amin'ny balam-borona raha miezaka ny ho any amin'ny sit-in ao Rabaa, mitorovoka miafina ao ambadiky ny fiara. hoy i i Bel Trew mpanao gazety iray
Manaparitaka ny sit-in ataon'ny Islamista ao Kairo ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Mandeha ny ady isa ao amin'ny Twitter.
Ilay Dia An-tongotra Mandeha Irerin'i Vladimir Putin
Eoropa Afovoany & Atsinanana 13 Aogositra 2013
Ataon'ny bilaogera mpanohitra firesaka sy famazivazy ny zavatra nataon'ny filoha rosiana sy ny governemantany tao anatin'ny volana vitsivitsy izao. Ahoana no mahatonga izany toe-javatra izany ary inona no ao ambadika?
“Novonoin-dRy Zareo Ny Eid ao Iràka”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Aogositra 2013
Nampalahelo ny fiafaran'ny Ramadany tany Iràka fa fandripahan'olona no nitranga. Nivadika rà mandriaka ny tokony ho fetim-piravoravoana sy fiarahan'ny mpianakavy. Fa moa mba misy miraharaha izany ve ny hafa?
Naato Ny Referandaoma Momba Fananganana Toby Nokleary Fahaefatra ao Taiwan
Mediam-bahoaka 11 Aogositra 2013
Fandresena vonjimaika ho an'ireo mpikatroka manohitra ny famokarana nokleary ao Taiwan izay manohitra ny fananganana tobim-pamokarana nokleary fahaefatra ao amin'ny firenena izany toe-javatra izany.